Imboni yesiphuzo sikabhiya
Ukusetshenziswa kwethangi lokuxuba kwimikhiqizo yamakhemikhali yansuku zonke
Umshini we-emulsification tank shaampoo umkhiqizi
Muva nje, inkampani ye-shampoo eyaziwayo i-ode imishini engu-8 ye-vacuum emulsification tank ukuze isetshenziswe njengemigqa yokukhiqiza imoto. I-Shampoo ingumkhiqizi owaziwa kahle wama-anti-dandruff shampoos eChina. I-shampoo ekhiqizwa emakethe ingumkhiqizo ophakathi nendawo ukuya phezulu. Imishini yokuxuba nokuxuba ...
Imishini yokukhiqiza yokunonga
Imishini yethangi yokukhipha i-Qiangzhong, umzimba wethangi wenziwe ngezinto zensimbi ezingenasici ezisezingeni eliphakeme, elifanele ingcindezi yasemkhathini, ingcindezi encane, ukucocwa kwamanzi, ukucwilisa okufudumele, ukushisa kwe-reflux, ukuvuza kwegazi okuphoqelelwe, ukukhipha uwoyela onephunga elimnandi ne-solvent engokwemvelo ngokwesiko lamaShayina kimi .. .
Imishini yokukhiqiza ubhiya
I-Qiangzhong inolwazi olunzulu embonini yemishini yokuphuza, inikezela ngemishini ephephile nethembekile yazo zonke izinhlobo zabakhiqizi beziphuzo. Ukwethembeka okuqinile nakho kunikela ngokwakhiwa, ukwenziwa, ukufakwa, ukugcinwa, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe kanye nezinye izinsizakalo zomkhiqizo wesiphuzo ...
Imishini yokukhiqiza ukudla
Izinto zikaQiangzhong ezintweni zokudla konke zenziwe ngomshini wenhlanzeko osezingeni eliphakeme. Inokubukeka okunethezeka, indawo ebushelelezi nokusebenza okuhle kwesakhiwo. Ipholile ngaphakathi nangaphandle, akukho ukungcola, akukho ukuvuza, kuphephile futhi kunokwethenjelwa. NgoFebhuwari 2014, a ...
Ukusetshenziswa kwemishini ye-emulsification embonini yeziphuzo
Iningi leziphuzo zezithelo nemifino zisatshalaliswa ngokungafani okunamandla okuqinile-uketshezi, uketshezi-uketshezi, namathangi we-emulsion, amathangi agxishiwe, kanye namaphampu we-shear emulsification aphezulu adingeka ukufeza izinga eliphezulu lokufana. Ithangi le-emulsification, ithangi lokuxuba, i-shear ephezulu emulsificati ...
Imishini yokukhiqiza ubisi
Imishini yemishini yeQiangzhong isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni nasekukhiqizeni amakhemikhali, ukudla, okwelapha, okwenziwayo kanye neminye imikhiqizo yezimboni. Inqubo yokukhiqiza imishini yeQiangzhong, ubuhle, ikhwalithi nesisindo. Imishini esetshenziswa yiQianzhong Imishini ye-dai ...
Kwenziwe ngentando kuhlangana ithangi
Imishini yokwenziwa kwemithi
Imishini yemishini yeQiangzhong isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni nasekukhiqizeni amakhemikhali, ukudla, okwelapha, okwenziwayo kanye neminye imikhiqizo yezimboni. Inqubo yokukhiqiza imishini yeQiangzhong, ubuhle, ikhwalithi nesisindo. Izinto zokusetshenziswa Qiangzhong Pharmaceutical Eq ...
Ukusetshenziswa kwethangi lokuxuba ekukhiqizeni umanyolo wamanzi